DOTCT Inopemberera Mwedzi yeCaribbean Tourism neVhiki reZvinhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » DOTCT Inopemberera Mwedzi yeCaribbean Tourism neVhiki reZvinhu
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trinidad neTobago Breaking News
Dhipatimendi reKushanya, Tsika neKufambisa (DOTCT) inobatana neCaribbean Tourism Organisation (CTO) nedunhu mukupemberera Mwedzi weCaribbean Tourism 2017 nekuitisa nhevedzano yezviitiko kubva munaNovember 19th - 26th, 2017.
Inozivikanwa gore rega rega pasi penyaya Rimwe Gungwa, Izwi Rimwe, Imwe Caribbean, Mwedzi weCaribbean weKushanya unoshanda senzira iyo nzvimbo dzekuCaribbean dzinokwanisa kuuya pamwechete uye pamwe chete dzinoyeuchidza nyika kuti dunhu rakashama kubhizinesi.
Pachinzvimbo cheDefination Tobago, Chikamu chinotora mukana uno kuwedzera ruzivo nezve mabhenefiti eTobago indasitiri yekushanya kuhupfumi hwechitsuwa; kukudziridza pfungwa yekuzvikudza uye muridzi weiyo Tobago chigadzirwa chekushanya pakati pevagari veichi chitsuwa; kukurudzira kubatana kukuru pakati pehurumende nehurumende; pamwe nekuvaka hunhu uye kukurudzira mweya wehukama pakati pevashandi veDivision.
Iyi inotevera chirongwa chezviitiko zveCaribbean Tourism Mwedzi
SVONDO 19TH NOVEMBER, 2017
Kuvhurwa kweInopindirana Museum - Fort King George Heritage Park, 3pm & 5 pm
Mitambo inoitwazve kuFort King George ichatanga kubva Svondo 19 Mbudzi, nerwendo rwemahara ruchiitika na3 pm na5 pm. Pachavewo nechikamu chekutaura nyaya na2 masikati. Iyo Inopindirana Museum ichave yakavhurika kune veruzhinji pamazuva ekufambisa ngarava anosheedzera pachitsuwa, na10: 30 am na2 pm, uyezve paSvondo na3 pm. Kushanya kunodhura $ 20 (vakuru) uye $ 10 (vana).
Muvhuro 20TH NOVEMBER, 2017
Vechidiki Tourism Symposium yezvikoro zveSekondari - Shaw Park Cultural Complex, 9 am-2pm
Iyo "Youth Tourism Symposium" ndiyo yekutanga yerudzi rwayo muTobago uye inonanga maFomu 4-6 vadzidzi vakanyoresa kuSecondary Zvikoro pachitsuwa ichi. Musoro wenyaya yekusiyirana ndeyeKusimudzira Hutungamiri hwevechidiki mune Tourism. Chinangwa ndechekupa mukati mevechidiki vepachitsuwa kukoshesa, uye kunzwisisa kweiyo indasitiri yekushanya; dzidzisa vadzidzi pamusoro pekukosha kwechikamu; uye kukurudzira kufarira muindasitiri seyakanakira sarudzo yebasa. Vatauri vanosanganisira:
VaTravis Robinson, Secretary weParamende, Ministry of Tourism uye Aviation, Hurumende yeBahamas
Mme Le-An Telesford, Gurukota rezveVashanyi, Trinidad neTobago
Mr. Dwayne Lyons, Tobago Entrepreneur, Xclusive Mazano
Chipiri 21ST NOVEMBER, 2017
Yekutenda Sevhisi - DOTCT Musoro Hofisi, 12 Sangster's Chikomo, 9am
Iyo Yekutenda Sevhisi isiri-yemasangano yakavhurika sevhisi, inoitirwa kupemberera kushanda nesimba kwevashandi vese mukati meDivisi uye kusimudzira mweya wekubatana pakati pevashandi.
Primary School Nharaunda Yekuzivisa Quiz Mafinari uye Mubairo Kupa Mubairo - Lowlands Multipurpose Center, 9am - 1pm
Iyo Yekutanga Chikoro Nharaunda Yekuzivisa mibvunzo inotsvaga kudzidzisa uye kukurudzira vadzidzi veTobago vePuraimari vadzidzi nezve kukosha kwekushanya kune hupfumi hwechitsuwa, uye kusimbisa pavari iro rakakosha basa ravanogona kutora mukuvandudza kweindasitiri. Iine gumi nembiri (12) zvikoro zvepuraimari zvinotora chikamu, iyo quiz inotanga kubva pa15 - 20 Mbudzi.
CHINA 23RD NOVEMBER, 2017
Stakeholders Cocktail Reception - Pigeon Point Heritage Pavilion, 7 pm-10pm
Iyo Stakeholder Reception inotsvaga kuunza pamwechete vashandi vemaindasitiri vanobatanidzwa mune ese ehurumende neakazvimirira chikamu. Chiitiko ichi chakagadzirirwa kufambisira hukama, pamwe nenhaurirano inovaka nechinangwa chekuvandudza kubatana pakati pemapato ese ari muindasitiri yekushanya kweTobago.
Mugovera 26TH NOVEMBER, 2017
Tobago Great Tourism Adventure - Chitsuwa chakafara, 9am
Iyo Tobago Yakakura Yekushanya Yekushanya inoisa mutsika kutsauka pane yechinyakare kupfuma pfuma. Vatori vechikamu vachatora rwendo rwunonakidza kuyambuka chitsuwa ichi, pakutsvaga kugadzirisa zvirahwe nekuita mabasa anozovadzidzisa mutsika nehupfumi hwenyika yechitsuwa ichi. Nhoroondo dzezvakaitika kare, zvinokwezva zvemifananidzo uye tsika dzekare dzese dzinozoonekwa mune ino-ye-ye-mhando chiitiko.
Yekushanya Svondo Yemagariro Media Campaign
Ramba wakatarisana neDivision of Tourism, Tsika uye Zvokufambisa - Tobago House of Assembly Facebook peji rekuparurwa kweMy Tourism Story mavhidhiyo akateedzana, mutambo weSotop Sites, nezvimwe.